कोरोनाले अमेरिकामा एकैदिन १ हजार ५ सय ९२ जना मानिसको मृत्यु। - Malayakhabar
होम पेज विश्व कोरोनाले अमेरिकामा एकैदिन १ हजार ५ सय ९२ जना मानिसको मृत्यु।
कोरोनाले अमेरिकामा एकैदिन १ हजार ५ सय ९२ जना मानिसको मृत्यु।
वासिङ्टन(अमेरिका):= अमेरिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण मङ्गलबार एकै दिनमा १ हजार ५९२ जनाको मृत्यु भएको जोन्स हप्किन्स् विश्वविद्यायले जानकारी दिएको छ । गत २४ घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण भएको यो मानवीय क्षति गएको साढे दुई महिना यताको नै सबैभन्दा बढी भएको जनाइएको छ।
स्थानीय समयानुसार मङ्गलबार राती ८ः१० सम्म एकै दिनमा अमेरिकामा ६० हजार कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका बाल्टिमोर आवद्ध विश्वविद्यालयल जानकारी दिएको छ । अमेरिकामा ४४ लाख ९८ हजार ३४३ जनाको सङ्क्रमित भएका छन् भने १ लाख ५२ हजार ३२० जनाको मृत्यु भइसककेको छ।
कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरीमा एक करोड ६९ लाख १ हजार ४०७ जना सङ्क्रमित भएका छन् । गतवर्षको डिसेम्बर महिनाबाट चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट शुरु भएको यस भाइरसको कारण विश्वभरीमा ६ लाख ६३ हजार ५५७ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ।
अघिल्लो लेख सुन्न चाहन्छौ ? के छ म सङ” !!
पछिल्लो लेख कोरोना भाइरसको संक्रमणले साउदीमा नेपाली पत्रकार रोशन श्रेष्ठको मृत्यु।
स्पेनका पूर्वराजा कार्लोसले छाडे देश, साउदी अरबमा पुगेको खुलासा
श्रीलंकाको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षबाट शपथ ग्रहण